MM Popular – Page2– News And Videos
” GFatt က ညဘက္ၾကီး နန္းဆုအိမ္ကုိ ဘာသြားလုပ္တာလဲ ? ” . မင္းသမီးေလး နန္းဆုရတီစုိးက ညဘက္ၾကီး သူမအိမ္ေရာက္လာခဲ့တဲ့ GFatt ကုိ စေနာက္လုိက္ပါတယ္ … (အျပည့္အစုံဖတ္ရန္ ပုံကုိႏွိပ္ပါ)
GFatt နဲ့ နန်းဆုရတီစိုးတို့ နှစ်ဦးကတော့ ၀ါသနာတူ အနုပညာရှင်စုံတွဲလေးတစ်တွဲအဖြစ် ပရိတ်သတ်တွေက သဘောတူထားကြပါတယ် ။ အလုပ်ခရီးတွေ ထွက်ရလဲ အတူတူ ပွဲတွေဖျော်ဖြေရလဲ အတူတူမို့ အမြဲ အတူရှိနေတတ်ကြတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်က ရံဖန်ရံခါ သူတို့ ပရိတ်သတ်တွေ အတွက် အတူတူ Live တွေတောင်လွှင့်ပေးတတ်ပါတယ် ။ Social Network မှာလည်း အမြဲ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်စနောက်နေကြတာမို့ သူတို့ရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေက သူတို့ကို ကြည့်ပြီး ရောပျော်ရွှင်နေရတာပါပဲ ။ ခုလည်း မင်းသမီးလေး နန်းဆုရတီစိုးက ညဘက်ကြီး သူမအိမ်ရောက်လာခဲ့တဲ့ GFatt ကို စနောက်လိုက်ပြန်ပါတယ် ။ GFatt ရဲ့ နောက်ပြောင်ပြီးပို့စ်ပေးထားတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးနဲ့ …
” အနမ္း၀ုိင္ ဇာတ္ကားေနာက္ကြယ္က လူတုိင္းမသိေသးတဲ့လ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ေတြထြက္ေပၚလာ” တကယ္နမ္းခဲ့ႀကတဲ့ ေအာင္ရဲလင္း နဲ႕ ၀တ္မႈန္ေရႊရည္ သရုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ အနမ္း၀ုိင္ ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က………………. အၿပည့္အစုံဖတ္ရန္ပုံကုိႏွိပ္ပါ –
လက်တလောရုံတင်ပြသနေဆဲဖြစ်တဲ့ အနမ်းဝိုင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကတော့ ရုံပြည့်ကျိတ်ကျိတ်တိုးအားပေးသူတွေနဲ့ လူကြိုက်များလျက်ရှိပါတယ်။ လူငယ်ဒါရိုက်တာ အောင်မြတ်ပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတဲ့ အနမ်းဝိုင် ဇာတ်ကားကြီးမှာတော့ နိုင်ငံကျော်သရုပ်ဆောင် အောင်ရဲလင်း နဲ့ဝတ်မှုန်ရွှေရည်တို့ က အဓိကပါ၀င်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ အနမ်းဝိုင် ဇာတ်ကားကို မရိုက်ကူးခင်မှာ ဒီကားမှာပါ၀င်တဲ့ ရုပ်ရှင်အဖွဲ့သားတွေကြိုးစားထားရတဲ့ နောက်ကွယ်က လူတိုင်းမသိသေးတဲ့ အရာတွေရှိနေပါတယ်။ (၁) လိုအပ်ချက်တွေနည်းနိုင်သမျှနည်းနိုင်ရန်အတွက် တစ်Scene ချင်း တစ်Cut ချင်းစီကို ရုပ်ရှင်တစ်ကားလုံးစာ StoryBoard ကိုလည်း ကြိုတင်ရေးဆွဲပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်ရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာလည်း ယင်း StoryBoardထဲကအတိုင်းပဲ အသေးစိတ်ရိုက်ကူးခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ (၂)သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ အဝတ်အစား၊ဆံပင်နဲ့ မိတ်ကပ်တွေကို ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခန်းချင်းစီအလိုက်ဖြစ်သင့်တဲ့အပြင်အဆင်၊လိုက်ဖက်ညီမယ့်အရောင်တွေအတိုင်း Mood Board နဲ့အတူ Fashion Art Director က Scene …
ျပန္ေပါင္းထုပ္ၾကေတာ့မွာလားရဲေလး…သူတို႔ႏွစ္ေယာက္သာ ျပန္အဆင္ေျပသြားရင္ေတာ့ပရိသတ္ႀကီးေပ်ာ္႐ႊင္ သြားၾကမွာအေသအခ်ာပါပဲ။အခ်စ္စစ္မွန္ရင္ေတာ့ ျပန္ဆုံဆည္းၾကမွာေပါ့ေနာ္
ပြန်ပေါင်းထုပ်ကြတော့မှာလားရဲလေး နာမည်ကျော်အဆိုတော်ရဲလေးနဲ့မအေးမြအောင် တို့ကတ္တီပါလမ်းခွဲခဲ့ကြတာအားလုံးသိကြမှာပါ။ အခုအခါမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံး ကိုယ်စီကိုယ်စီဘဝလမ်းကြောင်းတွေမှာ လျှောက်လမ်းနေကြပါပြီ။တစ်ချိန်ကအရမ်းချစ်ခဲ့ ကြတဲ့ချစ်သူနှစ်ယောက်အခုလိုလမ်းခွဲခဲ့ကြတာ သူတို့ကိုချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးစိတ်မကောင်းဖြစ် နေကြပါတယ်။ ဒီနေ့သူတို့ကိုချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးကြားမှာ မေးခွန်းတစ်ခုုဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့တာ့ကတော့ မအေးမြအောင်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်မှာရဲလေးရဲ့ ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကိုShareထားပြီး “အဲ့လိုချစ်တတ်မှန်းသိလို့ သွားနေကျနေရာတွေမသွားစေချင်ဘူအချစ်ဆုံးရယ်” လို့ရေးထားခဲ့လို့ပါတယ်။ရဲလေးရဲ့Video Clipလေးရဲ့ နာမည်က”သဲကိုချစ်တယ်”တဲ့။ လွန်ခဲ့သောရက်တချို့မှာလည်းမအေးမြအောင်က အလွမ်းစာသားလေးတွေရေးတင်ခဲ့လို့ပရိသတ်တွေ ကသူတို့နှစ်ယောက်ပြန်အဆင်ပြေသွားကြပြီလို့ ထင်နေခဲ့ကြတာပါ။သူတို့နှစ်ယောက်သာ ပြန်အဆင်ပြေသွားရင်တော့ပရိသတ်ကြီးပျော်ရွှင် သွားကြမှာအသေအချာပါပဲ။အချစ်စစ်မှန်ရင်တော့ ပြန်ဆုံဆည်းကြမှာပေါ့နော်။ ျပန္ေပါင္းထုပ္ၾကေတာ့မွာလားရဲေလး နာမည္ေက်ာ္အဆိုေတာ္ရဲေလးနဲ႕မေအးျမေအာင္ တို႔ကတၱီပါလမ္းခြဲခဲ့ၾကတာအားလုံးသိၾကမွာပါ။ အခုအခါမွာေတာ့သူတို႔ႏွစ္ေယာက္စလုံး ကိုယ္စီကိုယ္စီဘဝလမ္းေၾကာင္းေတြမွာ ေလွ်ာက္လမ္းေနၾကပါၿပီ။တစ္ခ်ိန္ကအရမ္းခ်စ္ခဲ့ ၾကတဲ့ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္အခုလိုလမ္းခြဲခဲ့ၾကတာ သူတို႔ကိုခ်စ္ၾကတဲ့ပရိသတ္ႀကီးစိတ္မေကာင္းျဖစ္ ေနၾကပါတယ္။ ဒီေန႕သူတို႔ကိုခ်စ္ၾကတဲ့ပရိသတ္ႀကီးၾကားမွာ ေမးခြန္းတစ္ခုုျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။အဲ့တာ့ကေတာ့ မေအးျမေအာင္ကသူ႕ရဲ႕လူမႈကြန္ယက္မွာရဲေလးရဲ႕ ဗီဒီယိုေလးတစ္ခုကိုShareထားၿပီး “အဲ့လိုခ်စ္တတ္မွန္းသိလို႔ သြားေနက်ေနရာေတြမသြားေစခ်င္ဘူအခ်စ္ဆုံးရယ္” လို႔ေရးထားခဲ့လို႔ပါတယ္။ရဲေလးရဲ႕Video Clipေလးရဲ႕ နာမည္က”သဲကိုခ်စ္တယ္”တဲ့။ လြန္ခဲ့ေသာရက္တခ်ိဳ႕မွာလည္းမေအးျမေအာင္က အလြမ္းစာသားေလးေတြေရးတင္ခဲ့လို႔ပရိသတ္ေတြ ကသူတို႔ႏွစ္ေယာက္ျပန္အဆင္ေျပသြားၾကၿပီလို႔ ထင္ေနခဲ့ၾကတာပါ။သူတို႔ႏွစ္ေယာက္သာ ျပန္အဆင္ေျပသြားရင္ေတာ့ပရိသတ္ႀကီးေပ်ာ္႐ႊင္ …
ပရိသတ္ေတြ စိတ္ဝင္စားေနတဲ့ ေအးျမတ္သူရဲ႕ခ်စ္သူ….ေအးျမတ္သူကေတာ့ သူမရဲ႕ခ်စ္သူကို ယခုလိုအလင္းျပလိုက္ပါျပီ။
အနုပညာလောကကို မော်ဒယ်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာပြီး လက်ရှိမှာတော့ ပရိသတ်ချစ် နာမည်ကြီး မင်းသမီးတစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေသူကတော့ မင်းသမီး အေးမြတ်သူ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရိုးယဉ်ယဉ် ပုံစံလေးနဲ့ ပရိသတ်တွေဆီ တကျော့ပြန်လည်လာတဲ့သူမကိုတော့ ပရိသတ်တွေက ချစ်မဝဖြစ်လို့ နေကြပါတယ်။ ရွယ်တူမင်းသမီးတွေ အိမ်ထောင်ပြုကုန်ပေမယ့် အခုထိ အပျိုကြီးလုပ်နေတဲ့ မမြတ်လေးကတော့ ရည်းစားရှိတယ်လို့ ပရိသတ်ကို ဝန်ခံထားပေမယ့် ရည်းစားက ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာကိုတော့ ထုတ်ပြောထားခြင်း မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တလောက “နောင်တွင်ဥဒါန်းတင်စေသတည်း” ဇာတ်ကားရိုက်ကွင်းမှာ အမျိုးသားတစ်ဦးနဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံကို သူမရဲ့ instagram မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်ပုံမှာတော့ “mycrush my❤️ missukm” ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့ ပုံလေးကို တင်ထားပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကတော့ ဒီပုံထဲကသူက မမြတ်လေးရဲ့ ချစ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ …
ပာိန္းေဝယံ နဲ ့စိုးျပည့္သဇင္တို႔ရဲ႕ ခ်စ္မိေတာ့လည္း
ပာ်ိန်းဝေယံ နဲ ့စိုးပြည့်သဇင်တို့ရဲ့ ချစ်မိတော့လည်း သရုပ်ဆောင် ပာ်ိန်းဝေယံ နှင့် စိုးပြည့်သဇင်တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်တဲ့ “ချစ်မိတော့လည်း” ဗီဒီယိုဇာတ်ကား ရဲ့ရှိုက်ကွင်းမှ ဓါတ်ပုံများကိုတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ဒီ ဇာတ်ကားကို ဒါရိုက်တာ နီသစ် က ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး အခြား ဇာတ်ပို့ သရုပ်ဆောင်များစွာလည်း ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
အဆိုတော်၊မင်းသမီး စန္ဒီမြင့်လွင်ကတော့ အနုပညာကိုမျိုးနဲ့ရိုးနဲ့ လုပ်ကိုင်လာခဲ့ကြတဲ့ အနုပညာအသိုင်း အဝိုင်းကြီးထဲမှ အနုပညာအမွေကိုဆက်ခံလာသူလေးတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောလူမှုကွန်ယက် တွေပေါ်မှာတော့ သူမရဲ့ မင်္ဂလာသတင်းလေးတွေက အရမ်းကိုလူပြောများနေပြီး ရေပန်းစားလို့နေပါတယ်။ မကြာခင်မှာ အိမ်ထောင်ပြုတော့မှာဖြစ်တဲ့ သတို့သမီးလောင်းလေး စန္ဒီမြင့်လွင်ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲလေးကိုလည်း ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်စား စောင့်မျှော်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သတို့သမီးလောင်းလေးစန္ဒီမြင့်လွင်နဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုသီဟလွင်တို့ရဲ့ မင်္ဂလာမော်ကွန်းတင်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ လေးကို မတ်လ(၄)ရက်နေ့၊ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့၊တော်ဝင်ဂါးဒင်းဟိုတယ် မှာလက်မှတ်ထိုးပွဲလေးပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး ဒီနေ့ရက်မြတ်လေးကတော့ သူတို့ဇနီးမောင်နှံလေးနှစ်ဦးအတွက် တကယ်ကိုကြည်နူးစရာနေ့လေးတစ်နေ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်မိဘစုံစုံလင်လင်နဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ချို့တက်ရောက်ချီးမြင့်ခဲ့ကြတဲ့ ဒီပွဲလေးမှာတော့ သူတို့နှစ်ဦးနဲ့ထပ်တူပရိသတ်တွေပါ ကြည်နူးပျော်ရွှင်နေကြရပါတယ်။ ပရိသတ်အချစ်တော် စန္ဒီမြင့်လွင်တစ်ယောက်လည်း အရမ်းကိုပျော်ရွှင်နေပြီး လဝန်းလေးလို့အေးမြတဲ့ အပြုံး တွေဝေဆာနေတာကို ကြည်နူးဖွယ်မြင်တွေ့ရပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ PreWedding ပုံရိပ်လေးတွေ လူမှုကွန် ယက်မှာတင်ခဲ့စဉ်ကတည်းက ပရိသတ်တွေအားကျနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေကို …
ပာ်ိန်းဝေယံ နဲ ့စိုးပြည့်သဇင်တို့ရဲ့ ချစ်မိတော့လည်း သရုပ်ဆောင် ပာ်ိန်းဝေယံ နှင့် စိုးပြည့်သဇင်တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်တဲ့ “ချစ်မိတော့လည်း” ဗီဒီယိုဇာတ်ကား ရဲ့ရှိုက်ကွင်းမှ ဓါတ်ပုံများကိုတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ဒီ ဇာတ်ကားကို ဒါရိုက်တာ နီသစ် က ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး အခြား ဇာတ်ပို့ သရုပ်ဆောင်များစွာလည်း ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ပာ္ိန္းေဝယံ နဲ ့စိုးျပည့္သဇင္တို႔ရဲ႕ ခ်စ္မိေတာ့လည္းသ႐ုပ္ေဆာင္ ပာ္ိန္းေဝယံ ႏွင့္ စိုးျပည့္သဇင္တို႔ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတာျဖစ္တဲ့ “ခ်စ္မိေတာ့လည္း” ဗီဒီယိုဇာတ္ကား ရဲ႕ရွိုက္ကြင္းမွ ဓါတ္ပုံမ်ားကိုတင္ျပလိုက္ပါတယ္။ဒီ ဇာတ္ကားကို ဒါရိုက္တာ နီသစ္ က ရိုက္ကူးထားတာျဖစ္ၿပီး အျခား ဇာတ္ပို႔ သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားစြာလည္း ပါဝင္ …
လက္မထပ္ခင္ အေဝအဖန္ခံရၿပီး လက္ထပ္ၿပီးေနာက္ အမ်ားအားက်ျခင္းခံရတဲ့ အႏုပညာရွင္မင္းသမီးမ်ား လူေတြဟာ လည္း အေျပာင္းအလဲျမန္ၾကတယ္ အျပည့္အစံု –
အနုပညာရှင်ဆိုသည် မှာ မည်သည့် အပြုအမူ ဘဲလုပ်လုပ် ဝေဖန်မယ်ဆိုပြီး စောင့်နေတဲ့ သူတွေ ဟာ အမြဲရှိပါတယ်။ မိမိ ကြိုက်တဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက် လက်ထပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းဟာလည်း ပရိသတ်တွေ အတွက်တော့ တုန်လှုပ်စရာကောင်းလောက်တဲ့ သတင်းတစ်ခုပါ။ ထို့ကြောင့်လဲ ဝိုင်းပြီး ရှုတ်ချမှုတွေ မတူမတန်ပြောဆိုမှုတွေ ခံခဲ့ရသော်လည်း ယခုဆိုရင်တော့ အားလုံးဝိုင်းပြီး အားကျခြင်းကိုခံနေရတဲ့ အနုပညာရှင်များ…. 1 (၁) ချစ်သုဝေ နှင့် လင်းလင်း ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ချောချော မောမော ချစ်သုဝေ နှင့် အဆိုတော် လင်းလင်းတို့လက်ထပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းဟာ ချစ်သုဝေ ပရိသတ်တွေ အဖို့ လင်းလင်းကို ဝိုင်းပြီး ရှုတ်ချခဲ့ကြပါတယ်။ …
“သင္တုိ႕ကုိ အားက်ေစမယ့္ အႏုပညာရွင္စုံတြဲ(၃)တြဲရဲ႕ မဂၤလာပြဲပုံရိပ္မ်ား” သူတုိ႕ေတြရဲ႕ မဂၤလာပြဲတုန္းကပုံေလးေတြၿပန္ႀကည့္ရင္း ခ်စ္သူနဲ႕ လက္ထပ္ဖုိ႕ စိတ္ကူးယဥ္ႀကည့္ရေအာင္.. အၿပည့္အစုံဖတ္ရန္ပုံကုိႏွိပ္ပါ –
၀ါကျွတ်ပြီဆိုတော့ အနုပညာရှင်တွေထဲမှာလည်း စွံတဲ့သူစွံသွားကြပါပြီ။ မင်္ဂလာပွဲဆင်နွွှဲပြီးတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်း ကိုယ့်ရဲ့ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့လေးတွေရောက်တဲ့အခါတိုင်း မင်္ဂလာပွဲတုန်းက အမှတ်တရပုံလေးတွေပြန်ကြည့်ရင်း ကြည်နူးပိတိဖြစ်မိမှာပါ။ 1 ပရိသတ်ချစ်ခင်အားပေးတဲ့ နာမည်ကြီးဆယ်လီတွေမှာ သူတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ပြုစ အချိန်လေးကို ပြန်တွေးရင် အမှတ်ရစရာဖြစ်ရပ်တွေရှိချင်ရှိခဲ့မှာပါ။ လက်တလောမှာတော့ အိမ်ထောင်ကျပြီး မိသားစုဘဝပိုင်ဆိုင်ထားကြပြီဖြစ်တဲ့ နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်တွေရဲ့ အရင်က မင်္ဂလာပွဲပုံရိပ်တွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ပရိသတ်အချစ်တော်တွေဖြစ်တဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကျဲမင်းသား မင်းသမီးစုံတွဲဖြစ်တဲ့ ပြေတီဦး နဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင် တို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲပုံရိပ်တွေဆီ ပြန်သွားကြမယ်နော်။ လက်ရှိမှာတော့ လိုက်ဖက်ညီလှတဲ့ သူတို့စုံတွဲဟာ သမီးတစ်ယောက် သားတစ်ယောက်နဲ့ မိသားစုဘဝလေးဖြတ်သန်းနေပါတယ်။ အနုပညာလောကထဲမှာ အမွှာသမီးလေးတွေမွေးထားတဲ့ အနုပညာရှင်စုံတွဲတစ်တွဲဆိုရင်တော့ချစ်သုဝေနဲ့ လင်းလင်း တို့ဇနိီးမောင်နှံပါ။ …
“မိဘမဆံုးမလို့ မဟုတ္ပါဘူး လူငယ္ျဖစ္တဲ႔အတြက္ေၾကာင့္ သမီးျဖစ္သူကို နားလည္ေပးေစခ်င္တယ္” လို ့ေျပာလာတဲ့ ေရႊမွံဳရတီရဲ႕ မိခင္ အျပည့္စံုၾကည့္ရန္